Incazelo: Chitha uhambo lwakho ku itheku ethule ogwini Mediterranean, ngendlela eziyinkimbinkimbi ethokomele Sefikbey Ihhotela 3, esemgwaqweni at unyawo Taurus Izintaba kuleli yokungcebeleka ka Kemer, km 55 kusuka Antalya Airport. Kulesi sigodi olunothile uzothola ulwandle afudumele, fresh air, isihlabathi futhi itshana amabhishi isihlabathi legolide elihle orange zeminqumo. Konke lokhu kuyokusiza ukuba shí emkhathini yokuthula.
Ngenxa iziqongo entabeni, okuyinto awuvikele imimoya enamandla, kuba sezulu ukhululekile kakhulu futhi umswakama high, ngakho izivakashi ungakhululeka lapha nganoma yisiphi isikhathi sonyaka. Amabili izakhiwo ezine storey ezakhiwa hhayi kudala - ngo-2003, futhi ngaleso sikhathi kwakudingeka uthuthukise (ngo-2008). Ahlotshiswe Classic isitayela nezindlu - endaweni encane batshala izihlahla esifuze nezinye zasemazweni. Ncoma eziyinkimbinkimbi kungaba okwesikhathi uyayithanda, romantic and intsha.
Vala Sefikbey Ihhotela 3 Ihhotela igxile bezitolo, ezitolo, kukhona ezintathu disco club. Eduze kukhona itheku yacht kanye amabhishi engcono. Ngesikhathi enkabeni yedolobha kuyinto ipaki encane.
Amagumbi: Ihhotela siqukethe amakamelo 60. Ephambi kwezinduna amakamelo ejwayelekile kanye amafulethi nge ezindaweni ezimbili abazinikezele. Nsuku zonke, nezincekukazi esinenhlonipho bahlanza (ekuseni), futhi ushintsho zokulala kwenzeka zonke izinsuku ezingu-7. Zonke amakamelo balcony nge ukubukwa legceke.
Ikamelo ejwayelekile uhlanganisa ngamunye elawulwa air conditioning, ikamelo eshaweni nge WC, eqondile Ukudayela ucingo, umbala TV nesiteshi isiRashiya, Khokha ephephile futhi hairdryer.
Le ndlu siqukethe amakamelo amabili angawodwa - lokulala kanye nekhishi. I lokulala has a double embhedeni, ikhabethe futhi eliseceleni kombhede amatafula. Ekhishini - efrijini, microwave, izitsha, iketela. Kungenzeka futhi ukuba ukuxhuma kwi-Wi-Fi.
Ukudla: I eziyinkimbinkimbi Sefikbey Ihhotela linikeza ukudla ohlelweni "zonke okufakayo". Amathebula asizwa yokudlela on the schedule. Yokudlela ine Veranda evulekile, eyenzelwe izihlalo ezingu-80. Emini, iziphuzo yokuthopha zokukhiqiza endawo ezahlukene amandla nokukhanya Ungadla.
Uma ufuna u-ice cream, juice asanda isibambo noma utshwala izinga ke ngoba le njabulo kuyodingeka bakhokhe. Ngaphezu yokudlela main, ibha eseduze ichibi ongaphandle - ke ivulwa 10 ekuseni kuya ku-22 ntambama. Ibha ukhonza cocktail aqabulayo ngezithelo noma dessert esimnandi.
Beach: Private lolwandle endaweni imayelana 500 metres kusukela ehhotela Sefikbey Ihhotela 3. Ukubuyekeza nhlobonhlobo - abanye bajabula ngokukhululwa amabhishi ehlanzekile kolwandle efudumele, kanti abanye abawuthandi yokuthi ebhishi kuyinto ibangana esuka isakhiwo. Kodwa on the lonke ugu ukwenze bahle abantu.
Into esemqoka ukuthi ogwini konke ukunethezeka kwase-ukusetshenziswa mahhala, futhi ebhishi ibiyelwe wasemasosheni, kubukele izihlwele. Kuhleliwe khulula Shuttle ogwini. On ibhange labelwe ezemidlalo izindawo amageyimu, futhi Ubuye maphakathi amanzi ezemidlalo.
Imininingwane engeziwe: On Indawo ebiyelwe Sefikbey Ihhotela 3 eziyinkimbinkimbi lakhiwa endaweni evulekile-swimming pool, eduze kwayo kukhona ukhululekile lounge izihlalo kanye izambulela. Ngesikhathi sokudla kwasemini, lapho kushisa futhi libalele, ungathatha ngokwakho table tennis noma chess. Noma ukuqasha imoto ukuhlola indawo wendawo.
Izingane zakho zingaba zingena emhlabeni on inkantolo, lapho kukhona senhliziyo, amaslayidi nemigoqo ovundlile. Izingane kukhona kwesigaba ahlukene ngasechibini ongaphandle. Yokudlela iyatholakala izingane highchairs.
Digest: Uma ufuna ehhotela Chic abaqhoshayo, eyinkimbinkimbi Sefikbey Ihhotela 3 - akuyona indawo yokuphumula. Nokho, uma ungeyena kubalulekile kuwe ukusibekela nokutamasa, futhi okubaluleke kakhulu, kuze kufike elwandle sefika futsi kwabakhona ezondlekile ke bamukelekile. Ikakhulukazi, le mvume ngeke azibizi kakhulu, futhi imali elondoloziwe, uzothola ezithakazelisayo ukubona indawo izinkambo noma eziyisikhumbuzo mass.
Ihhotela umise ngokwaso ohlangothini oluhle, inikeza inkonzo eliphezulu nokudla esihle. Izinzuzo main - indawo enkulu, abasebenzi eziwusizo futhi service enhle. Uma ukhetha efulethini, niyophila efulethini elincane, ne ekhishini yayo - akukho muntu futhi akukho lutho ezingonakalisa nokuhlanganyela kulelo holide. Uyoba ithuba eliyingqayizivele ngesikhathi intengo imali ukuba uchithe amaholidi ongenakulibaleka phezu kolwandle ukubaleka kusuka ezindabeni zansuku zonke.
Spa Amahhotela e Karelia nge pool: Izibuyekezo ngezithombe
Sindbad Beach 4 - i iholide ngiyilibale
Greece Amahhotela ngemindeni nezingane: uphumule nomndeni wonke!
Mini Ihhotela Petersburg: kawonkewonke
Intel Xeon E5 processor - 2660: Isibuyekezo, Ukucaciswa
Turkey Tasty, ephekwe eziko in ucwecwe: okungcono zokupheka, ikakhulukazi ukupheka kanye nokubuyekeza
Uyini ukushintshashintsha kwezwi imvamisa